Bodyrub avo lenta • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Ny maodelinay dia voasivana be, miasa irery eto, ary salama saina, GORGEOUS, ary tena tia an'ity orinasa ity. Izahay eto dia mikarakara anao. Mandroboka anao ao anaty oasis ao an-tanàna ary hanome anao traikefa miavaka izay mamela anao hahatsapa ho maivana, mora ary mihavao.
Ny maodelinay raharaham-barotra dia nalaina tahaka tsy nisy fahombiazana satria ny tena fotony - ny tena toetrantsika dia tena izy ka tsy azo averina, tsy azo foronina. Mikarakara anao marina tokoa izahay! Miahy ireo mpamatsy anay izahay, ny mpiasa ao aminay, ary na iza na iza mifandray aminay eto amin'ny Upscale Bodyrub.
Izahay mitazona ny toerana misy anay amin'ny toetr'andro madio miaraka amin'ny lamba firakotra madio madio, ranonorana mafana, ary ny fanaka rehetra ilainao hanana traikefa miavaka. Tapa-kevitra izahay fa ho tara-masoandro amin'ny andronao. Ny tanjonay dia ny mamela anao hitsikitsiky ny tavanao, ny hafanana ao am-ponao, ary ireo fahatsiarovana mahafinaritra izay entinao miaraka aminao mandritra ny andronao rehetra.
Mino ny marina isika amin'ny doka.
TSY MIARAKA SADY NA MANDRIAMANITRA SADY ISIKA.
Sarobidy amintsika ny fotoananao - TSY HANANJAKA BOKY NA HITSIPIKA FITSIPIKA NY FANJAKANAO AZY IZAY IZAY, AZONAO AZA ATAO MBA HANOMPOANA ANAO FOANA IANAO rehefa mamaky.
Ka omeo antso izahay, hamandrika io fotoana io anio. Ny mpandray tsara antsika dia afaka mamaly ny fanontanianao rehetra.
Satria mendrika hankafy ny tsara indrindra ianao.
W 37th St, New York, NY 10018, Etazonia
Alatsinainy: 11 maraina - 9 alina
Talata: 11 maraina - 9 alina
Alarobia: 11 maraina - 9 alina
Alakamisy: 11 maraina - 9 alina
Zoma: 11 maraina - 9 alina
Asabotsy: 11 maraina - 9 alina
Alahady: 11 maraina - 9 alina